မနက်ဖြန်တစ်ရက်သာ အသက်ရှင်ခွင့်ရတော့မယ်ဆို သင်ဒီနေ့ဘာလုပ်နေမှာလဲ ? – Trend.com.mm
မနက်ဖြန်တစ်ရက်သာ အသက်ရှင်ခွင့်ရတော့မယ်ဆို သင်ဒီနေ့ဘာလုပ်နေမှာလဲ ?
မနက်ဖြန်တစ်ရက်သာ အသက်ရှင်ခွင့်ရတော့မယ်ဆို စာဖတ်သူတို့ရော ဒီနေ့မှာ ဘာလုပ်နေမှာလဲ ? ရှိသမျှစည်းစိမ်တွေ အကုန်ရောင်းပြီး လိုအပ်တဲ့လူတွေကို လှူတန်းလိုက်မှာလား ? ရတဲ့အချိန်လေးမှာ ဘဝကူးကောင်းအောင် တရားတော်တွေနားထောင်မှာနေမှာလား ? နောက်ဆုံး
ထွက်သက်အချိန်ထိ ကိုယ်ဝါဿနာပါရာကိုပဲရူးသွပ်စွာနဲ့ ဆက်လုပ်နေမှာလား ?
နေ့မြင် ညပျောက် တိုတောင်းလွန်းတဲ့လူ့ဘဝကြီးက တကယ်တမ်းတွေးကြည့်လိုက်ရင် နည်းနည်းတော့လန့်ဖို့ကောင်းသား။ ဒါပေမယ့် အချိန်တန်ရင် လူတိုင်း ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်ရမှာပါပဲ။ ပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင် ဒီနေ့အထိ ငါဘာတွေကိုလုပ်ပြီးပြီလဲ ? အကျိုးရှိတာတွေလား ၊ မရှိတာတွေလား ?
ဘဝရဲ့ အရသာကိုရော အပြည့်အဝခံစားပြီးပြီလား ? ဖြစ်ချင်တာတွေရောတကယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီလား ? ကြိုးစားနေတုန်းလား ။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကိုတောင် မရောက်သေးပဲ သေဖို့ဆိုတာတော့မဖြစ်သေးဘူး။ အပြင်ထွက်လိုက်တာနဲ့ လူတွေအပြေးအလွှား ဟိုဒီသွားနေတာ တွေ့တယ်မလား။ အဲ့ဒီလူတွေထဲမှာ ရတဲ့နေရာမှာ အပူပင်ကင်းကင်း သက်တောင့်သက်သာနေနေတဲ့လူတွေလည်းရှိသလို အိပ်မက်တွေကို အကောင်ထည်ဖော်ဖို့ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။
နောက်ဆုံးမှာ ဘယ်သူက ဘယ်နေရာရောက်သွားလဲဆိုတာ အချိန်ကအဖြေပေးသွားလိမ့်မယ်။ သင်ရော ဘယ်နေရာမှာရှိချင်လဲ ? ခုထိ ကြည့်မရတဲ့လူတွေရှိနေတုန်းလား ? သူငယ်ချင်းအချင်းချင်းရန်ဖြစ်ပြီး မခေါ်မပြောတာဘယ်လောက်ကြာနေပြီလဲ ?မိဘတွေအပေါ်ဆိုးတုန်းလား ?ကလေးဆန်မနေပါနဲ့တော့။ နောက်မှ နောင်တရတဲ့ခံစားချက်က အရမ်းခံရခက်ပါတယ်။ အချိန်တွေက အရမ်းတန်ဖိုးရှိတဲ့အတွက် ရတဲ့အချိန်လေးမှာ အမုန်းတွေမပွားပဲ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းသွားရအောင်! ပြန်တွေးလိုက်တိုင်း အလိုလိုပြုံးမိသွားစေမယ့် အမှတ်တရတွေသာ ဖန်တီးနိုင်ကြပါစေ။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်မှုကို အရေးပေါ်ကုသနိုင်မယ့် အိမ်သုံးပစ္စည်းများ